Teeth Brighter | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
पोस्ट ट्याग "दाँत brighter"
घर-आधारित दाँत सेतो तरिकाहरू
आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न
बेकिंग सोडा लगभग हरेक घर को भान्सा मा उपलब्ध छ र मद्दत गर्छ आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न. मानिसहरू Tastemaker रूपमा बेकिंग सोडा प्रयोग. बेकिंग सोडा पनि सफाई उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ. यो रेफ्रिजरेटर देखि पन्जेन्ट गंध हटाउन प्रभावकारी काम गर्दछ. तपाईं आफ्नो दाँत सफाई लागि बेकिंग सोडा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. सोडा पाक प्रकृति मा घर्षण छ र यो सुविधा तपाईं आफ्नो दाँत को सबै भन्दा ज्यादा सतह देखि दाग हटाउन मद्दत गर्छ. दाँत whitening, लागि, सोडा को एक चम्चा लिन, पानी केही ड्रप र एक नम नरम-bristled टूथब्रश. आफ्नो पाम मा सोडा लिन र यो एक पेस्ट बनाउन यो पानी को थोपा थप्न. अब पेस्ट मा टूथब्रश डिप र आफ्नो दाँत माझ्छु. तपाईं हरेक हप्ता रूपमा एक पटक धेरै यो विधि पालन गर्न सक्छौं.
सेतो दाँत गाइड पोस्ट - जुन 4, 20167मा:25 AM
विभाग: घर आधारित सेतो दाँत गर्न ट्याग: बेकिंग सोडा, आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न, दाँत brighter, आफ्नो दाँत सेतो